Hiakatra Velona any An-danitra ve ny Voahosotra Amin’ny Fahoriana Lehibe?
“Mijoroa ka mitrakà fa efa manakaiky ny fanafahana anareo.” —LIOKA 21:28.
HIRA: 133, 43
Inona no zavatra hitranga tsy ho ela, izay mitovitovy tamin’ilay niseho tamin’ny taona 66?
Inona ilay fotoam-pitsapana hitranga aorian’ny fandravana an’i “Babylona Lehibe”?
Inona ilay asa fanangonana resahin’ny Matio 24:31?
1. Inona no nitranga tamin’ny taona 66? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
TAONA 66 tamin’izay. Maro ny zava-niseho tao Jerosalema. Nangalatra talenta 17 tao amin’ny fitehirizam-bolan’ny tempoly i Florus, governora romanina. Nikomy avy hatrany àry ny Jiosy, ka namono an’ireo miaramila romanina tao Jerosalema ary nilaza fa tsy zanatany romanina intsony. Tonga dia nandefa miaramila 30 000 tany Jerosalema anefa ny Romanina, telo volana taorian’izay. I Cestius Gallus, governora romanina tany Syria, no nitarika azy ireo. Vetivety izy ireo dia tafiditra tany amin’ireo tanàna manodidina an’i Jerosalema, ka niafina tao amin’ny tempoly ireo Jiosy nikomy. Nandoaka tsikelikely ny mandan’ny tempoly ny miaramila romanina. Nisahotaka ny iray tanàna. Raha Kristianina tao Jerosalema ianao tamin’izay, ahoana no ho nataonao?
2. Nila nanao inona ny Kristianina tamin’ny taona 66, ary nahoana izy ireo no afaka nanao an’izany?
2 Azo antoka fa ho tadidinao ilay tenin’i Jesosy hoe: “Rehefa hitanareo fa misy miaramila mitoby manodidina an’i Jerosalema, dia fantaro fa manakaiky ny fandravana azy. Koa izay any Jodia, aoka handositra any an-tendrombohitra, ary izay ao Jerosalema aoka hiala ao, ary izay eny ambanivohitra aoka tsy hiditra ao Jerosalema intsony.” (Lioka 21:20, 21) Mety ho niady saina àry ianao hoe: ‘Ao ivelan’i Jerosalema aza feno miaramila, koa ahoana no handosirako?’ Tsy nampoizina anefa fa niala tsikelikely ny miaramila romanina. ‘Nohafohezina’ ny fanafihan’izy ireo, araka ny efa nolazain’i Jesosy. (Mat. 24:22) Hitanao àry hoe tonga ny fotoana hanarahana an’ilay tenin’i Jesosy. Mandositra any an-tendrombohitra any ampitan’ny Reniranon’i Jordana avy hatrany ianao sy ny Kristianina hafa ao Jerosalema sy ny manodidina. * Nisy tafika romanina tonga tao Jerosalema tamin’ny taona 70, ary nandrava azy io. Tsy maty anefa ianao satria nankatò an’i Jesosy.
3. Inona no hitranga tsy ho ela, ary inona no hodinihintsika ato?
3 Tena kely sisa dia hiatrika zavatra mitovy amin’izany isika. Efa nampiomanin’i Jesosy ny Kristianina voalohany fa horavana i Jerosalema. Nilaza koa anefa izy fa hitovy amin’izay nitranga tamin’izany no hitranga rehefa tonga tampoka ny “fahoriana lehibe.” (Mat. 24:3, 21, 29) Soa ihany fa hisy “vahoaka be” ho voavonjy amin’io loza hitranga eran-tany io. (Vakio ny Apokalypsy 7:9, 13, 14.) Inona avy no lazain’ny Baiboly fa hiseho amin’izany? Tena tokony hahafantatra ny valin’izany isika raha te ho voavonjy. Hodinihintsika àry hoe nahoana no mahakasika antsika tsirairay ireo zavatra hitranga ireo.
AHOANA NO HANOMBOHAN’NY FAHORIANA LEHIBE?
4. Inona no ho famantarana fa manomboka ny fahoriana lehibe, ary ahoana no hahatanteraka izany?
4 Ahoana no hanombohan’ny fahoriana lehibe? Milaza ny Apokalypsy fa horavana i “Babylona Lehibe” na ny fivavahan-diso rehetra. (Apok. 17:5-7) Ampitahaina amin’ny mpivaro-tena izy ireo, ary mety tsara izany. Toy ny mivaro-tena amin’ny mpitondra eto amin’ity tontolo ratsy ity ny mpitondra fivavahana. Tsy manohana an’i Jesosy sy ny Fanjakany mantsy izy ireo fa manohana mpitondra olombelona. Te hahazo fahefana koa izy ireo ka tsy miraharaha ny toro lalan’ny Baiboly. Tsy mba toy izany kosa ny Kristianina voahosotra fa madio toy ny virjiny. (2 Kor. 11:2; Jak. 1:27; Apok. 14:4) Iza anefa no handrava an’i Babylona Lehibe? Ny ‘tandroka folon’ilay bibidia mena midorehitra’ no hampiasain’i Jehovah ‘hanatanteraka ny heviny.’ Ny mpitondra olombelona rehetra ankehitriny ireo tandroka ireo. Manohana ny Firenena Mikambana na ilay “bibidia mena midorehitra” izy ireo.—Vakio ny Apokalypsy 17:3, 16-18.
5, 6. Ho ringana daholo ve ny mpivavaka ao amin’i Babylona Lehibe rehefa rava izy io? Hazavao.
5 Midika ve izany fa ho ringana daholo koa amin’izay ny mpivavaka rehetra ao amin’ny fivavahan-diso? Tsy voatery. Hoy i Zakaria mpaminany momba ireny mpivavaka ireny: “Hisy amin’izy ireo hilaza hoe: ‘Tsy mpaminany aho fa mpiasa tany, satria novidin’olona hatry ny fony kely.’ Ary hisy hanontany azy hoe: ‘Inona ireny ratra eny amin’ny vatanao ireny?’ Dia hoy izy: ‘Ratra tamin’ny namelezana ahy ireny, tamin’izaho tao an-tranon’ireo olona tia ahy fatratra.’ ” (Zak. 13:4-6) Mety hiala amin’ny fivavahany àry na dia ny mpitondra fivavahana sasany aza, ka hilaza fa tsy mbola tao amin’ny fivavahan-diso mihitsy.
6 Hanao ahoana kosa ny vahoakan’Andriamanitra? Hoy i Jesosy: “Raha tsy nohafohezina tokoa mantsy izany andro izany, dia tsy hisy nofo hovonjena, fa noho ny olom-boafidy, dia hohafohezina izany andro izany.” (Mat. 24:22) Hitantsika teo fa “nohafohezina” ilay fahoriana tamin’ny taona 66, ka afaka nandositra niala tao Jerosalema sy ny manodidina ireo “olom-boafidy” na ireo voahosotra. ‘Hohafohezina’ koa àry ny tapany voalohany amin’ny fahoriana lehibe, noho ny “olom-boafidy.” Tsy havela haripak’ireo “tandroka folo” ny vahoakan’Andriamanitra. Hisy fotoana milamindamina kely amin’izay.
FOTOAM-PITSAPANA SY FITSARANA
7, 8. Inona no ho azon’ny Kristianina porofoina rehefa rava ny fivavahan-diso rehetra, ary nahoana izy ireo no hiavaka amin’io fotoana io?
7 Inona no hitranga rehefa rava ny fivavahan-diso rehetra? Eo no fotoana hampisehoantsika an’izay tena ao am-pontsika. Hiafina any amin’ny ‘vatolampy eny an-tendrombohitra’ ny ankamaroan’ny olona, izany hoe hila vonjy amin’ny fikambanana naorin’olombelona. (Apok. 6:15-17) Handositra any amin’i Jehovah kosa ny vahoakany, izany hoe hiantehitra aminy. Tsy natao mba hiovan’ny Jiosy ho Kristianina ilay fotoana nisintahan’ny Romanina tamin’ny taona 66. Io kosa no fotoana nahafahan’ny Kristianina nanaporofo hoe mankatò an’i Jesosy izy. Tsy hanantena koa àry isika hoe hisy olona be dia be ho lasa Kristianina, mandritra ilay fotoana milamindamina kely amin’ny fahoriana lehibe. Fotoana hanaporofoan’ny tena Kristianina kosa io fa tia an’i Jehovah izy ireo sady manohana ny rahalahin’i Kristy.—Mat. 25:34-40.
8 Tsy tena fantatsika izay hitranga amin’io fotoam-pitsapana io nefa azo inoana fa tsy maintsy hisy zavatra hafointsika. Tsy maintsy namoy ny fananany, ohatra, ny Kristianina voalohany, ary niaritra ny mafy mba ho voavonjy. (Mar. 13:15-18) Ary ianao? Vonona hamoy fananana ve ianao amin’ny fahoriana lehibe? Vonona hanao izay rehetra asaina ataonao ve ianao mba tsy hivadihana amin’i Jehovah? Saintsaino ange e! Na inona na inona hitranga amin’izay, dia isika irery no mbola hanompo an’i Jehovah toa an’i Daniela mpaminany.—Dan. 6:10, 11.
9, 10. a) Inona no didim-pitsarana hambaran’ny vahoakan’Andriamanitra? b) Inona no hataon’ny fahavalon’izy ireo?
9 Tsy fotoana hitoriana ny “vaovao tsaran’ilay fanjakana” intsony amin’izay satria efa tena ho tonga ny “farany.” (Mat. 24:14) Azo antoka fa didim-pitsarana henjana indray no hotorin’ny vahoakan’i Jehovah. Mety hanambara izy ireo hoe tena efa ho rava tanteraka ny tontolon’i Satana. Ampitovin’ny Baiboly amin’ny havandra io didim-pitsarana io. Hoy ny Apokalypsy 16:21: “Nisy havandra vaventy avy any an-danitra nilatsaka tamin’ny olona, ka tokony ho roapolo kilao avy ny lanjan’ny havandra. Dia nanevateva an’Andriamanitra ny olona noho ny loza nentin’ny havandra, satria lehibe loatra ilay loza.”
10 Hahare an’io didim-pitsarana io ny fahavalontsika. Tsy iza izany fa i Goga avy any Magoga, izany hoe firenena maromaro mitambatra. Inona no hataon’izy ireo? Hoy i Ezekiela mpaminany: “Izao no nolazain’i Jehovah Tompo Fara Tampony: ‘Amin’izany andro izany, dia hisy fikasana hitsiry ao am-ponao, ary hanao teti-dratsy ianao, ka hiteny hoe: “Hiakatra hamely an’ilay tany misy tanàna tsy mimanda aho, ary hankany amin’ireo olona mandry feizay sy monina tsy amin’ahiahy, dia izay rehetra monina ao amin’ny tanàna tsy misy manda na bara hidiny na vavahady.” Ny haka babo betsaka sy ny handroba zavatra maro no kendrenao, ka haninjitra ny tananao ianao mba hanafika an’ilay toerana rava, izay efa misy mponina izao. Hotafihinao koa ilay vahoaka nangonina avy any amin’ireo firenena, dia vahoaka nihary harena sy fananam-be sady monina eo afovoan’ny tany.’ ” (Ezek. 38:10-12) Hiavaka ny vahoakan’i Jehovah amin’izay, toy ny hoe “monina eo afovoan’ny tany.” Tsy hahazaka izany ireo firenena ka ho maika erỳ hanafika ny voahosotra sy ny ondry hafa.
11. a) Inona no tsy resahin’ny Baiboly momba an’ireo zavatra hitranga mandritra ny fahoriana lehibe? b) Hanao ahoana ny olona rehefa hahita an’ireo famantarana eny amin’ny lanitra?
11 Inona no hiseho aorian’izay? Tsy resahin’ny Baiboly hoe inona no hitranga voalohany. Mety ho mbola tsy tapitra ny zavatra iray, dia efa hitranga ny manaraka. Hoy i Jesosy rehefa niresaka ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity: ‘Hisy famantarana eny amin’ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary etỳ ambonin’ny tany dia ho ory ireo firenena satria ho very hevitra noho ny fidoboky ny ranomasina sy ny fisamboaravoarany. Ary hisy ho safotra noho ny tahotra sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin’ny tany onenana. Fa hohozongozonina ny herin’ny lanitra. Ary ny olona hahita ny Zanak’olona ho avy amin-kery sy voninahitra lehibe, ao amin’ny rahona.’ (Lioka 21:25-27; vakio ny Marka 13:24-26.) Hisy famantarana sy zavatra mampahatahotra tokoa ve eny amin’ny lanitra? Ho hitantsika eo ihany izany, fa ny azo antoka dia hoe hihorohoro sy hisahotaka ny fahavalon’Andriamanitra.
Tsy hatahotra isika satria hatoky tanteraka fa hanafaka antsika i Jehovah sy Jesosy (Fehintsoratra 12, 13)
12, 13. a) Inona no hitranga rehefa ho avy “amin-kery sy voninahitra lehibe” i Jesosy? b) Hanao ahoana ny vahoakan’i Jehovah amin’izay?
12 Inona no hitranga rehefa ho avy “amin-kery sy voninahitra lehibe” i Jesosy? Hamaly soa an’izay tsy mivadika izy, ary hanasazy ny fahavalon’i Jehovah. (Mat. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28-30) Rehefa avy niresaka ny famantarana ny andro farany i Jesosy, dia nanao fanoharana momba ny ondry sy ny osy. Hoy izy: “Rehefa tonga ny Zanak’olona amin’ny voninahiny, miaraka amin’ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin’ny seza fiandrianany be voninahitra izy. Dia hangonina eo anatrehany ny firenena rehetra. Ary hanavaka ny olona izy, toy ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin’ny osy. Ary hametraka ny ondry eo ankavanany izy, fa ny osy eo ankaviany.” (Mat. 25:31-33) Inona no didim-pitsarana miandry ny ondry sy osy? Hoy ihany i Jesosy: “Ho any amin’ny fandringanana mandrakizay [ny osy], fa ny olo-marina kosa ho any amin’ny fiainana mandrakizay.”—Mat. 25:46.
13 Inona no hataon’ny osy rehefa fantany hoe ho ‘ringana mandrakizay’ izy? “Hikapo-tratra sy hitomany” izy ireo. (Mat. 24:30) Ary ireo rahalahin’i Kristy sy ny ondry hafa tsy mivadika? Hanaraka an’ity tenin’i Jesosy ity izy ireo: “Rehefa manomboka mitranga izany, dia mijoroa ka mitrakà fa efa manakaiky ny fanafahana anareo.” (Lioka 21:28) Tsy hatahotra izy ireo satria hatoky tanteraka fa hanafaka azy i Jehovah sy Jesosy Kristy Zanany.
HAMIRAPIRATRA AO AMIN’NY FANJAKANA
14, 15. a) Inona ilay fanangonana resahin’i Matio sy Marka? b) Ahoana no hanaovana izany?
14 Inona no hitranga rehefa manomboka miady amin’ny vahoakan’i Jehovah i Goga avy any Magoga? Nanoratra i Matio sy Marka hoe: ‘Haniraka ny anjely ny Zanak’olona sady hanangona ny olom-boafidiny avy any amin’ny vazan-tany efatra, avy any amin’ny faran’ny tany ka hatrany amin’ny faravodilanitra.’ (Mar. 13:27; Mat. 24:31) Tsy ilay fanangonana ny voahosotra nanomboka tamin’ny Pentekosta taona 33 no tiana horesahina eo. Tsy ny fanisiana tombo-kase farany an’izay voahosotra mbola eto an-tany koa izy io. (Mat. 13:37, 38) Alohan’ny fahoriana lehibe mantsy no hasiana tombo-kase izy ireo. (Apok. 7:1-4) Inona àry no dikan’ilay hoe ‘hangonina ny olom-boafidy’? Hangonina ho any an-danitra izay voahosotra mbola etỳ an-tany. (1 Tes. 4:15-17; Apok. 14:1) Hitranga izany raha vao manomboka manafika i Goga avy any Magoga. (Ezek. 38:11) Ho tanteraka ilay tenin’i Jesosy hoe: “Amin’izany fotoana izany kosa ny olo-marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro ao amin’ny fanjakan’ny Rainy.”—Mat. 13:43. *
15 Maro no mino fa hiakatra velona any an-danitra ny Kristianina, ary tena ho hita maso eny amin’ny rahona i Jesosy. Milaza mazava anefa ny Baiboly fa ny “famantarana ny Zanak’olona” no hiseho eny amin’ny lanitra, ary “ao amin’ny rahon’ny lanitra” izy no ho avy. (Mat. 24:30) Midika izany fa tsy ho hita maso i Jesosy rehefa ho avy. Milaza koa ny Baiboly fa “tsy afaka mandova ny fanjakan’Andriamanitra ny nofo aman-dra.” Tsy maintsy “hovana ao anatin’ny fotoana fohy dia fohy, ao anatin’ny indray mipy maso” àry izay voahosotra mbola eto an-tany, “rehefa maneno ny trompetra farany.” * (Vakio ny 1 Korintianina 15:50-53.) Fotoana fohy koa no hanangonana azy ireo ho any an-danitra.
16, 17. Inona no hitranga alohan’ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry?
16 Inona no hitranga rehefa tonga any an-danitra daholo ny 144 000? Hisy fiomanana faramparany any satria efa hanomboka ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry. (Apok. 19:9) Mbola hisy zavatra hitranga anefa alohan’izay. Efa hitantsika hoe hiady amin’ny vahoakan’i Jehovah i Goga, aloha kelin’ny hanangonana any an-danitra an’izay voahosotra mbola eto an-tany. (Ezek. 38:16) Ho toy ny hoe tsy misy mpiaro ny vahoakan’i Jehovah amin’izay. Inona no hataon’izy ireo? Hankatoavin’izy ireo ity toromarika nomena an’i Josafata Mpanjaka ity: “Tsy mila miady ianareo amin’ity indray mandeha ity. Samia maka ny toerany ka mijoroa tsara fotsiny, ary jereo ny famonjen’i Jehovah anareo. Aza matahotra na mihorohoro, ry Joda sy Jerosalema ô!” (2 Tan. 20:17) Hanao inona kosa ireo 144 000 mpiara-manjaka amin’i Kristy any an-danitra? Hiaraka amin’i Jesosy hamonjy ny vahoakan’i Jehovah eto an-tany izy ireo. Hoy ny Apokalypsy 17:14: “Hiady amin’ny Zanak’ondry [ny fahavalon’Andriamanitra]. Haharesy an’ireo anefa ny Zanak’ondry satria Tompon’ny tompo sy Mpanjakan’ny mpanjaka izy. Haharesy koa ireo voantso sy voafidy ary tsy mivadika izay miaraka aminy.”
17 Hipoaka àry ny ady Hara-magedona, ka hahazo voninahitra ny anarana masin’i Jehovah. (Apok. 16:16) “Ho any amin’ny fandringanana mandrakizay” ny osy rehetra. Tsy hisy faharatsiana intsony eto an-tany, ary ho tafavoaka velona amin’ny tapany farany amin’ny fahoriana lehibe ny vahoaka be. Hatao avy eo ilay zavatra resahina faramparany ao amin’ny Apokalypsy. Tsy inona izany fa ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry. (Apok. 21:1-4) * Hiavaka tokoa io fampakaram-bady io! Tena ho faly mantsy ny vahoaka be satria hankasitraka azy Andriamanitra, ary hanome azy fitahiana be dia be. Efa tsy andrinao ve ny hahatongavan’io fotoan-dehibe io?—Vakio ny 2 Petera 3:13.
18. Inona no tokony hataontsika satria hisy zavatra miavaka hitranga tsy ho ela?
18 Kely sisa dia hahita zavatra tena miavaka isika. Inona àry no tokony hataontsika tsirairay? Hoy ny apostoly Petera: ‘Koa satria ho levona ireo zavatra rehetra ireo, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin’ny fitondran-tena masina sy ny fanehoana fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra, raha mbola miandry sy manao an-tsaina foana ny fanatrehan’ny andron’i Jehovah! Koa satria miandry izany zavatra izany ianareo, ry malala, dia ataovy izay rehetra azonareo atao mba ho hitany ho tsy misy pentina sy tsy misy tsiny ary ao amin’ny fihavanana ianareo, amin’ny farany.’ (2 Pet. 3:11, 12, 14) Miezaha foana àry mba ho masina sy hanohana an’ilay Mpanjakan’ny Fiadanana.
^ feh. 2 Jereo Ny Tilikambo Fiambenana 15 Aprily 2012, pejy 25-26.
^ feh. 14 Jereo Ny Tilikambo Fiambenana 15 Jolay 2013, pejy 13-14.
^ feh. 15 Tsy iny izy mbola vatan’olombelona iny no ho lasa any an-danitra. (1 Kor. 15:48, 49) Hovana ho fanahy kosa ireo voahosotra, toa an’i Jesosy tamin’izy niakatra tany an-danitra.
^ feh. 17 Resahin’ny Salamo faha-45 koa ny zavatra hitranga amin’izany. Voalaza ao hoe hiady amin’ny fahavalony aloha ilay Mpanjaka vao hampaka-bady.